खेतालाको छोरो « Mero LifeStyle
दिन प्रतिदिन रम्भाको उमेर चढ्दै गयो । गाजलु आँखा, लामो आँखी भौं, सुन्दर लामो कालो कपाल, चटक्क परेको नाक, अनि सदा मुस्कान छर्ने मुख । मोतीका दाना जस्ता दन्तपङ्ति । रभ्मा भगवानले फुर्सदमै बनाए झै लाग्थिन् ।
उनको सुन्दर मुहारलाई सुहाउने जिउडालले गर्दा रभ्मा निकै आकर्षक तरुनी भैसकेकी थिई । कोकिलकन्ठको त झन कुरै अर्को । बोल्दा हाँस्दा उनको हाउभाउले गर्दा नलठ्ठिने कोहि थिएनन् । १८ वर्षमा टेक्दै गरेकी रम्भा कलेज भर्ना भइ । उनको केटा साथी पनि निकै भए । तर, समय पावन्दीले गर्दा साथीहरुसँग निर्धक्क घुमफिर गर्न भने पाउँदिन थिइन् । पढाईमा त्यति तेजिलो नभए पनि त्यति कमजोर पनि थिईनन् उनी ।
रौनकसँग सामान्य बोलचालबाहेक अरु कुनै सम्बन्ध भएन । रौनक पनि रम्भालाई मनै देखि चाहन्थे । मन मन्दिरमा राखेर पूजा गर्थे । साँच्चै भनौं रौनक पनि रम्भाप्रति वन साइड लभमा फसिसकेका थिए ।
समय बित्दै गयो । पढ्दै गर्दा परिवारमा उनको विवाहको कुरा चल्यो । केटाहरु पनि हेरिए । हुन त कलेजका साथीहरु मध्ये हयाण्डसम् रौनकका बारेमा उनले केहि विचार गरेकी थिइन् ।
उनलाई रौनकको सुहाउँदो जिउडाल, भलादमीपन तथा पढाईमा तेज जस्ता कुराले मन जितेको थियो । तैपनि दुवै तिरबाट खास कुनै अग्रिम पाइला नचालिएको हुँदा मनको भाषा मनमै अल्झिएका थिए । कहिलेकहीँ सपनाको सागरमा डुबुल्की मार्दै उसँग घरजम चाहना पनि रम्भाको थियो ।
तर, उनको रौनकसँग सामान्य बोलचालबाहेक अरु कुनै सम्बन्ध भएन । रौनक पनि रम्भालाई मनै देखि चाहन्थे । मन मन्दिरमा राखेर पूजा गर्थे । साँच्चै भनौं रौनक पनि रम्भाप्रति वन साइड लभमा फसिसकेका थिए । तर, विभिन्न कारणले उनले पनि मनका कुरा रम्भा सामु राख्न सकेनन् । दुवैको मनमा प्रेमको अंकुर पलाएता पनि फष्टाउन पाएन ।
दिन वित्दै गए । रम्भाको विवाह परिवारजनको लागि एउटा बोझ जस्तै बनिसकेको थियो । घरको आर्थिक अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन । पढाई पनि छुट्यो । साथीसंगिनीहरु पनि कम हुँदै गए । उमेरले डाँडा काटिसकेको थियो । उनीसँगैका सैंसाथीका काखमा बालबच्च हुर्किसकेका थिए । तर, ग्रहदशाले गर्दा हो वा तारतम्य नमिलेर, रम्भाको घरजम भने हुन सकेन ।
एक दिन एउटा सम्पन्न घरपरिवारबाट रम्भाका लागि विवाहको प्रस्ताव आयो । बेहुला अधवैंशे भन्ने सुनियो । तर, धनसम्पति प्रशस्त भएको । परिवारले रम्भालाई जसरी पनि विहे गर्नुपर्ने दवाब दिन थाले । जसलाई उनले नकार्न सकिनन् । धुमधामले विवाह भयो ।
रम्भा लाजले भुतुक्क भईन । तर, केही बेरमैै उनमा पनि यौन इच्छा आँधीबेहरी सरह आयो । कुबेरले रम्भाभित्रको यौनेच्छालाई ठण्डा पार्न निकै कोशिस गर्यो । तर, सकेन । रक्सीको घुट्को थप्यो । तैपनि, सफल भएन ।
रम्भाले आफ्नो जीवनसाथीसँग अनेकौं सपना सोचेकी थिइन् । उमेरमा अलि बढी भएर के भयो त ? खान्दानी, भलादमी र प्रशस्त धनसम्पति भएको घरानिया दुलाहा भए भै गो नि । जब विवाह गरेर गइन् । सुहागरातकै दिनबाट उनीभित्र एकखालको ऐठन सुरु भयो । सुहागरातको दिन बेडरुममा उनी अनेकौं कल्पनामा डुबेर बसिरहेकी थिइन् । त्यति नै बेला श्रीमान (कुबेर)आएर उनलाई च्याप्प च्याप्यो । अनि चुरोट र रक्सीले दुर्गन्धित मुख रम्भाको मुखमा जोड्यो ।
उनलाई वान्ता आउला जस्तो भयो । तैपनि सहनबाहेक उनीसँग केही विकल्प थिएन । रात छिप्पिँदै गयो । कुबेरले एक–एक गरी रम्भाको शरीरबाट कपडा निकाली हुत्याउँदै गयो । एकैछिनमा उनी निर्वस्त्र भईन् ।
रम्भा लाजले भुतुक्क भईन । तर, केही बेरमै उनमा पनि यौन इच्छा आँधीबेहरी सरह आयो । कुबेरले रम्भाभित्रको यौनेच्छालाई ठण्डा पार्न निकै कोशिस गर्यो । तर, सकेन । रक्सीको घुट्को थप्यो । तैपनि, सफल भएन ।
रक्सीको तालमा श्रीमतीलाई कुमारी नै छाडी कुबेर बेखवरभै सुत्यो । रम्भाको यौन तृष्णा भने मेटिएको थिएन । मस्त निद्रामा रहेका कुवेरलाई पत्नीको ख्याल थिएन ।
एवम् रितले दिन बित्दै गयो तर, कुवेरले रम्भालाई कहिल्यै यौन सन्तुष्टि दिन सकेन । आप्mनो श्रीमानबाट यौन तृष्णा मेटाउने रम्भाको ईच्छा कहिल्यै पुरा भएन । समय बित्न कति बेर लाग्छ र ! विवाहको वर्र्षाैसम्म पनि रम्भाको कोख सुन्य नै रह्यो । यो कुराले कुबेरको परिवार र आफन्तमा भने खासखुस, गाईँगुईँ हुन थाल्यो ।
एक दिन रम्भा सपिङका लागि बजार गएको बेला अचानक कलेजका साथी रौनकसँग भेट भयो । पहिला कलेजका दिन कम बोल्थे दुबै जना । तर, धेरै वर्षपछि भेट भएकाले दुवैले राम्रैसँग बोलचाली गरे । रौनकले रम्भालाई कफी पिउन प्रस्ताव राखे । रम्भाले पनि सहजै मानिन् । दुवै जना कफी पिउँदै विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न थाले ।
कुराकानीकै क्रममा रौनकले रम्भाको वैवाहिक जीवनका बारेमा राम्रो भेउ पाए । यौन तृष्णाले थलिएकी रम्भाको आँखाहरुमा अलि–अलि निमन्त्रणाको भेउ पनि थियो । रौनकले रम्भाको इसारा बुझिहाल्यो । राम्रो नोकरीमा लागेकाले उसको जीवन मोजमस्तीमै बितेको थियो । यत्तिकैमा रौनकले रम्भा समक्ष कतै एउटा होटलमा गएर समय बिताउने प्रस्ताव राख्यो ।
रौनकले रम्भालाई बेडमा लडायो । अनि आफ्नो पुरुषार्थ देखाउन थाल्यो । रम्भाले पनि आफूलाई खुकुलो पार्दै गइन् । रम्भाका आकर्षक वक्षस्थल तथा सलक्क परेका तिघ्राहरुदेखि रौनक निकै उत्तेजित हुँदै गए ।
रौनकको सो प्रस्तावलाई उनले नकार्न सकिनन् । तुरुन्त होटलमा कोठा बुक गरे । केहि समयपछि दुबैजना होटलको कोठामा पुगे । केहीबेर दुवैजना पुराना कुरामा अल्झिए । यत्तिकैमा रौनकका हातहरु रम्भाको जिउमा सलबलाउन थाले । एक–एक गरि दुबैजना यौनको चरम उत्कर्षमा पुगे । दुबैजनाले एकअर्काको कपडा खोल्दै गए । रौनकको कस्सिएका शरीर तथा बलिष्ठ हातहरुको स्पर्शले रम्भामा एउटा असिम आनन्दको लहर दौडियो । शरीरमा करेण्ट लागेको जस्तो भयो । उनमा अब लाज भन्ने बस्तु नै बाँकी रहेन । निस्फिक्री, निडर, निर्लज्ज उनी यौवनको मज्जा लिन थालिन् ।
एकैछिनमा रौनकले रम्भालाई बेडमा लडायो । अनि आफ्नो पुरुषार्थ देखाउन थाल्यो । रम्भाले पनि आफूलाई खुकुलो पार्दै गइन् । रम्भाका आकर्षक वक्षस्थल तथा सलक्क परेका तिघ्राहरुदेखि रौनक निकै उत्तेजित हुँदै गए । उनीहरुबीचमा कुनै लाज, संकोच बाँकी रहेन । आपसी सहमति तथा सहयोगमा यौवनको भरपूर आनन्दमय सागरमा दुवैजना डुबे । धेरै दिनको भोकपछि मीठो खाना खाएको जस्तो अनुभव भयो रम्भालाई ।
निकै समय रम्भालाई तृप्त पारे पछि रौनक शिथिल भयो । रम्भा पनि पसिनाले निथ्रुक्क भइसकेकी थिइन् । रम्भाले यौन र पुरुषत्व कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइन् । अनि सम्झिइन् आफ्नो नपुंसक श्रीमानलाई । होटलमा केही घन्टाको बसाईपछि उनीहरु दुबैजना घर फर्किए ।
बधाई दिनेहरुको ताँती नै थियो । बेलुका परिवारजन तथा नातेदारहरु बोलाई भोज आयोजना गरियो । कुबेर बाबु बनेकामा परिवार आफन्तहरु पनि सबै खुशी देखिए । खेतालाबाटै छोरा पाए पनि रम्भा खुशी देखिन्थिन् ।
घर पुग्दा साँझ पर्न थालिसकेको थियो । त्यो दिन रम्भाले कुवेरलाई रातमा निकै सम्हालिन् । मायाको डोरीले बाँधिन् । रक्सी धेरै पिउन दिइनन् । पत्नीको अप्रत्यासित माया पाएर कुबेर पनि निकै खुशी थियो । रात छिप्दै गयो । रम्भाले कुवेरको शरीरलाई खेलाउन थालिन् । कुवेरमा केही समयमै उत्तेजित भयो । श्रीमतीलाई तृप्त पार्न तम्सियो । निकै कोसिस गर्यो । तर, रक्सीले गलिसकेका उसका तन्तुहरुमा त्यो यौवनको उत्तेजना पैदा हुँदै भएन । रम्भाले आज पनि श्रीमानबाट यौनसन्तुष्ट प्राप्त गर्न सकिनन् । अनि दिउँसो रौनकसँग बिताएको सुन्दर समयलाई सम्झन थालिन् ।
दिन बित्दै गयो । रम्भाको महिनावारी रोकियो । पेट पनि बढ्दै गयो । एकदिन बिहानैदेखि कुबेरको घरमा निकै चहलपहल देखिन्थ्यो । कारण रम्भाले छोरो जन्माएकी रहिछन् । कुवेरको खुशीको सिमाना नै थिएन । तर, छोरा कसरी जन्मियो भन्ने विषयमा भने मन–मनमा कुरा खेलाई रहे । बधाई दिनेहरुको ताँती नै थियो । बेलुका परिवारजन तथा नातेदारहरु बोलाई भोज आयोजना गरियो । कुबेर बाबु बनेकामा परिवार आफन्तहरु पनि सबै खुशी देखिए । खेतालाबाटै छोरा पाए पनि रम्भा खुशी देखिन्थिन् ।
[…] यो पनि पढ्नुहोस्खेतालाको छोरो […]